Aza mazan-doha! | NewsMada
Telo andro anio ny nanaovan’ny filoham-pirenena fanambarana fa mihiboka any an-trano avokoa ny rehetra. Hatreto, mbola betsaka ny tsy nanaraka izany toromarika izany, raha tsy hilaza afa-tsy ny tetsy Alarobia, ny tetsy Anosizato sy ny kaominina maro eto an-dRenivohitra fa mbola nisy ihany ireo mazan-doha. Soa fa nandray ny andraikiny ireo tomponandraikitry ny minisitera voakasika miaraka amin’ny mpitandro filaminana nanentana azy ireny. Tsorina, manana ilay toe-tsaina manamora sy manamaivan-javatra loatra ny akamaroan’ny Malagasy ka tsy laitran’ny balan’ny fananarana. Tsy fantatr’izy ireny fa areti-mandoza sy mandringana anie izy ity ary tsy mbola misy fanafody fanefitra na fanasitranana azy io, hatreto. Tsy fotoana intsony kosa angamba izao hanaovana mazan-doha fa ny ain’ireo vahoaka rehetra no mila arovana. Ny tsy fantatr’ireny olona mafy loha ireny, mety hamindra amin’ireo olona maro manodidina azy ao anatin’ny fotoana fohy izy, raha sanatria ka voan’izany tsimokaretina izany. Dia iza moa izany ny homena tsiny sa eo vao hanenina kanefa efa tara loatra.
Toy izany koa ireo tsena, tsy mba misy fahatsapan-tena mihitsy manakatona tsena rehefa tonga ny amin’ny 12 ora antoandro. Ny sasany aza moa, efa amin’ny 2 ora omaly mbola tsy mihidy kanefa eo ampitan’ny toby Ratsimandrava eo. Marina ny voalazan’ny mpivarotra iray teny fa mitsinjo ireo olona madinika izy ireo, izay mbola mitady vola ny maraina ka amin’ny tolakandro vao miantsena. Na izany aza, tokony hanara-dalàna avokoa ny rehetra fa tsy asiana miavaka izany.
Mipetraka eto ny fanontaniana, natao ho an’iza ny lalàna ary ahoana ny fampiharana azy ireny? indrindra amin’izao vaninan’andro sarotra izao. Rahoviana tokoa re isika vao hahay handray sy hanaraka ireny toromariky ny mpitondra ireny sa sanatria andrasana toy ny omby na atao toy ny tany Rosia, nandefasana liona sy tigra marobe eran’ny tanàna vao tsy ho sahy hivoaka? Aza mazan-doha!